Tag: famerenam-bola | Martech Zone
Tamin'ity herinandro ity, ny mpanjifa iray ifaneraserantsika dia nanontany ny antony tsy toa nanisy fiovana ny atiny niasa mafy tamin'izy ireo. Ity mpanjifa ity dia tsy niasa hampivelatra ny fanarahana azy amin'ny media sosialy, fa tsy hampihatra ny ankamaroan'ny ezaka ataon'izy ireo amin'ny marketing ivelany. Nanome azy ireo sary iray amin'ny haben'ny mpihaino azy izahay amin'ny media sosialy raha oharina amin'ireo mpifaninana aminy - ary avy eo dia nanome ny fiantraikany teo amin'ny fomba
Antontan'isa Marketing Influencer
Sabotsy 16 Novambra 2019 Sabotsy 16 Novambra 2019 Douglas Karr
Nozarainay ny infografika momba ny marketing influencer, ny fivoaran'ny marketing influencer taloha, ary koa ny lahatsoratra momba ny fomba fanao tsara indrindra amin'ny marketing influencer, ny fomba tsy fampiasana influencers, ary ny fahasamihafana misy eo amin'ny micro sy ny olo-malaza. Ity infographic ity dia manome antsipiriany ny topy maso momba ny marketing influencer sy ny paikady ary ny antontan'isa ankehitriny manerana ny mpanelanelana sy fantsona. Ireo olona ao amin'ny SmallBizGenius dia nametraka infographic feno izay manome fanjakana mazava ny marketing influencer ankehitriny, Under
Ahoana ny fikajiana ny fiverenana amin'ny fampiasam-bola amin'ny haino aman-jery sosialy
Alatsinainy, Aogositra 27, 2018 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Rehefa matotra ny mpivarotra sy ny sehatra media sosialy, dia mahita bebe kokoa momba ny fihoarana sy ny fihoarana amin'ny fampiasam-bola amin'ny media sosialy izahay. Ho hitanao fa matetika aho no mitsikera ny antenaina apetraky ny mpanolo-tsaina amin'ny media sosialy - saingy tsy midika izany fa mitsikera ny media sosialy aho. Mitsitsy fotoana sy ezaka be dia be aho amin'ny alàlan'ny fizarana fahendrena amin'ireo mitovy taona amiko ary miresaka amin'ny marika amin'ny Internet. Tsy misalasala aho fa nandany ny fotoana laniko tamin'ny media sosialy
Sabotsy, Janoary 20, 2018 Alahady 21 Janoary 2018 Douglas Karr
Ny fampahalalam-baovao sosialy dia nanana fampanantenana mahatalanjona ho mpanelanelana amin'ny fifandraisana eo amin'ny mpanjifa na ny mpanjifa sy ny orinasa manome ny vokatra na serivisy. Orinasa maro no nitsambikina avy hatrany fa ny ROI kosa dia saro-pantarina satria tsy matetika dia nifarana tamin'ny fidiram-bola na mivantana izany. Alohan'ny hametrahanao ny programa sosialinao hahombiazanao dia zava-dehibe ny mahatakatra hoe inona ireo hetsika tena mitondra ROI eo amin'ny fiaraha-monina. Marketing amin'ny atiny ve izany, ara-tsosialy
Zoma, Oktobra 27, 2017 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Mety efa namaky ny zavatra niainako mpanjifa niaraka tamin'i Waze tao amin'ny Twitter ianao vao nitory bug. Tsy dia nahaliana ahy ilay valiny. Eny, tsy izaho irery no mihamaro hatrany ny mpanjifa manatona media sosialy ary manantena ny hamahana ny olan'ny mpanjifa. Ny sasany tamin'ireo mpanjifako dia tsy faly loatra rehefa nilazako azy ireo ny fihetsiky ny mpanjifa mitsikera amin'ny tambajotra sosialy, saingy forum ho an'ny daholobe